बाबा रामदेवले विश्वकै सबैभन्दा सस्ताे स्मार्टफाेन ल्याउने रे ! - Everest Dainik - News from Nepal
बाबा रामदेवले विश्वकै सबैभन्दा सस्ताे स्मार्टफाेन ल्याउने रे !
नयाँ दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव र उनको कम्पनी पतंजलिले भारतमा आक्रामक व्यापार विस्तार गरिरहेको छ। हालसम्म आयुर्वेदिक औषधि र अन्य घरायसी उत्पादन बजारमा ल्याइरहेको पतंजलिले अब मोबाइल फोन ल्याउने हल्ला चल्न थालेको छ।
भारतीय मिडियामा कयौं अनलाइन प्लेटफर्महरूमा पतंजलिको मोबाइल फोन ‘पतंजलि पी-वान एस-फाइभ’को अनलाइन बुकिङ सुरु भएको जनाएका छन्। समाचार अनुसार यो फाइभ-जी फोन हुनेछ र सम्भवतः चिश्वकै सर्वाधिक सस्तो स्मार्ट फोन पनि हुनेछ।
तर पतंजलिले भने यस समाचारलाई पुष्टि गरेको छैन। हाल भारतमा फोर-जी प्रविधि नै प्रारम्भिक चरणमा रहेको अवस्थामा फाइभ-जी मोबाइल हल्ला मात्रै मानिएको छ।
याे पनि पढ्नुस गोप्य सूचनाहरु यसरी राख्नुहोस् सुरक्षित स्मार्टफोनमा
तर बाबा रामदेव र उनको कम्पनीको व्यापार गर्ने शैली अनुरुप तयार पारिएको यो समाचार रोचक भने निकै छ। भारतमा अझै फाइभ-जी नेटवर्क उपलब्ध छैन।
विभिन्न वेबसाइटहरूले पतंजलि फोनका अलग अलग स्पेसिफिकेसनहरू वेबसाइटमा राखेका छन्। कतिपयले यसमा ५ इन्चको डिस्प्ले रहने भनेका छन् भने कतिपयले साढे पाँच इन्चको रहने बताएका छन्। त्यस्तै फोनमा १ र ३ जीबीको ऱ्याम रहने समेत बताइएको छ। त्यस्तै फोनमा ८ जीबी र ३२ जीबीको इन्टरनल मेमोरी रहने समेत बताइएको छ।
त्यस्तै वेबसाइटहरूले दिएको जानकारी अनुसार यस फोनका अलग अलग डिजाइन समेत उपलब्ध रहेका छन्। जसमा पतांजलि गेरुवा, पतंजलि पिङ्क, प्तान्जली ब्लु र पतंजलि यङ्गस्तान रहेका छन्।
एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने यस फोनमा संस्कृत भाषा सपोर्ट रहने बताइएको छ।
यो फोन वातावरणमैत्री हुने र यसलाई सौर्य उर्जाबाट चार्ज गर्न सकिने समेत ती वेबसाइटहरूले जनाएका छन्।
उक्त जानकारीहरूमा उक्त फोन ९ सय ९९ देखि एक हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध रहने छ।
भारतीय समाचार माध्यमहरूले अधिकारिक पुष्टि नभएको यो संचार असत्य हुन् सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। किन भने वेबसाइटहरूले प्रि-बुकिङका लागि दिएका लिङ्कहरूमा अन्य फोनहरूको विवरण खुल्ने गरेको छ।
यसअघि फ्रिडम भन्ने एउटा कम्पनीले भारतमा दुई सय ५१ रुपैयाँमा नै स्मार्ट फोन उपलब्ध गराउने भन्दै बुकिङ समेत सुरु गरिसकेको थियो। तर पछि गएर त्यस कम्पनीका संचालक धोकाधडीको आरोपमा प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरिएका थिए।
बाबा रामदेवले यसअघि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको टेलिकम कम्पनी बीएसएनएलसँग मिलेर पतंजलि सिम बजारमा ल्याइसकेका छन्।
ट्याग्स: baba ramdev, smartphone